Ahoana ny famerenana na famerenana ireo iPhone X / Xr / X vaovao amin'ny dingana mora 3 | Vaovao IPhone
Ignacio Sala | | Fampianarana sy torolàlana
Ny fahatongavan'ilay iPhone X vaovao dia a fanovana vaovao amin'ny fomba fanaovana reset mafy na famerenana indray ilay fitaovana raha sanatria ka "tratra" izy na inona antony. Ary ny maodely iPhone alohan'ny iPhone 7 sy 7 Plus, ny fomba famerenana amin'ny laoniny ny fitaovana dia amin'ny alàlan'ny fanindriana ny bokotra an-trano sy ny bokotra herinaratra miaraka amin'izay. Tamin'ny fahatongavan'ilay iPhone 7 vaovao sy ny fanjavonan'ilay bokotra ara-batana dia nanova ny fomba famerenana na famerenana indray ny iPhone i Apple, tamin'ity indray mitoraka ity dia tonga ny fotoana hanindriana ny bokotra herinaratra sy ny bokotra fanamafisam-peo miaraka amin'izay.
Ho an'ny modely vaovao izay misokatra ao amin'ny fivarotany ankehitriny Apple, manova ny fizotrany indray isika ary amin'ity indray mitoraka ity dia zara raha misy bokotra amin'ny iPhone X vaovao tokony hataontsika dia dingana telo izay fariparitanay aorian'ny fitsambikinana.
1 Ahoana ny famerenana na famerenana iPhone X / Xr / Xs
2 Ahoana ny famonoana ny iPhone X, iPhone Xs, iPhone Xr, na iPhone Xs Max
3 Ahoana ny famerenana amin'ny laoniny iPad Pro amin'ny Face ID
4 Ahoana ny fomba famonoana iPad Pro miaraka amin'ny Face ID
5 Mihidy aho na mamerina manamboatra ilay fitaovana
6 Fa maninona no mihantona ny iPhone-ko
Ahoana ny famerenana na famerenana iPhone X / Xr / Xs
Rehefa ny efijery an'ny iPhone, iPad na iPod mikasika lasa mainty na tsy mamaly ny fitaovana Amin'ireo bokotra na fifandraisana izay ataontsika eo amin'ny efijery dia tsy maintsy manery ny famerenana amin'ny laoniny ny fitaovantsika isika.
Ahoana ny famerenana na famerenana ny iPhone X raha sanatria izany aza mamaly amin'ny fomba rehetra:
Tsindrio ny bokotra miakatra ary avoakanay
Tsindrio ny bokotra midina ary avoakanay
Notohizinay foana ny bokotra «On / Off» mandra-pahatongan'ny sary famantarana paoma
Raha toa ka tsy mahavaha ny olana ity famerenana amin'ny laoniny tanteraka ny fitaovana ity, ny tokony hataontsika dia ny fidirana na ny fiezahana hiditra amin'ireo fikirana iPhone. Izahay dia manao backup amin'ny iTunes, iCloud na amin'izay tiantsika ary mankany amin'ny Settings -> Settings -> General -> Restart. Ity dia tokony hamerina ny iPhone X ary hamaha ny olana, na izany na tsy izany dia tsy maintsy manao kopia voafafa foana isika raha sendra misy olana amin'ity karazana ity dia tokony hamerina ilay iPhone isika.
Ahoana ny famonoana ny iPhone X, iPhone Xs, iPhone Xr, na iPhone Xs Max
Mandra-pahatongan'ny famoahana ny iPhone X, ny bokotra iPhone / torimaso iPhone dia namela anay ihany koa hamono ilay fitaovana raha nitazona azy izahay nandritra ny segondra vitsy. Na izany aza, tamin'ny fanombohan'ny iPhone X dia niova ny zava-drehetra. Raha te-hamono ny iPhone X isika, ary ny maodely taty aoriana dia mila izany tsindrio miaraka ny bokotra an-trano / fatoriana miaraka amin'ireo bokotra boka.
Amin'izay fotoana izay, ny efijery momba ny iPhone dia hampiseho slider izay manasa antsika hisisika ny rantsan-tanantsika manaraka ny lalany mankany vonoy ny fitaovana.
Tsy io ihany no fomba tokony hamonoantsika ny iPhone X, satria amin'ny alàlan'ny menus Settings dia manana safidy ihany koa izahay hamono ny iPhone, na inona na inona modely. Noho izany dia tsy maintsy mankany isika Fikirana> Ankapobeny> Tapaka ny herinaratra. Ity safidy ity dia misy amin'ny iPad ihany koa, na inona na inona maodely.
Ahoana ny famerenana amin'ny laoniny iPad Pro amin'ny Face ID
Ny laharana iPad Pro 2018 no voalohany nahatratra ny tsena raha tsy nisy ny bokotra tokana niaraka tamin'ity fitaovana ity hatramin'ny maodely voalohany. Raha te hanolotra haben'ny efijery lehibe kokoa mitovy habe aminy dia nanapa-kevitra i Apple fa hanampy ny teknolojia Face ID amin'ny faritry iPad Pro amin'ny taona 2018, noho izany nanjavona ny bokotra fanombohana ary tsy afaka mamerina ny fitaovana tahaka ny nataontsika isika mandra-pahatongan'izany.
Ny dingana hamerenana ny iPad Pro miaraka amin'ny Face ID ary ny maodely taty aoriana dia tena tsotra ary tsy haharitra ela akory, mila fotsiny isika araho ny dingana etsy ambany:
Tsindrio ary esory haingana ny bokotra fanamafisam-peo.
Tsindrio ary esory haingana ny bokotra ambany.
Tsindrio ary tazomy ny bokotra Home / Sleep mandra-pahatongan'ny famerenan'ilay fitaovana.
Ahoana ny fomba famonoana iPad Pro miaraka amin'ny Face ID
Ny dingana hamonoana iPad Pro miaraka amin'ny Face ID Mitovy amin'ny ataontsika ny famonoana ny iPhone X sy ny maodely taty aoriana. Mila manindry ny bokotra fanombohana / torimaso fotsiny isika ary tsy mamoaka ny bokotra roa amin'ireo bokotra roa mandra-pisehoan'ny slider eo amin'ny efijery izay manasa antsika hamono ilay fitaovana.
Mihidy aho na mamerina manamboatra ilay fitaovana
Toy ny solosaina, ny famerenana indray dia tsy mitovy amin'ny fanidiana. Raha manohy mamono ny iPhone isika, ny rafitra miasa dia tompon'andraikitra amin'ny fanidiana ny fizotran-javatra misokatra rehetra mba hirosoana amin'ny fanakatonana azo antoka ny rafitra fiasa ary tsy manome olana amin'ny fikirakirana rehefa manomboka azy io indray. Mihatra amin'ny solosaina ihany io teoria io.
Etsy ankilany, raha averintsika indray ilay fitaovana, tapaka tanteraka ny fiasan'ny rafitra fiasa, nefa tsy manome fotoana ny fampiharana sy ny serivisy hikatona tsara amin'ny fitaovantsika. Toy ny tamin'ny tranga teo aloha, ity teôria ity dia mihatra amin'ny solosaina ihany koa. Ny olana amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny solo-saintsika dia izany tsy vitan'ny hoe afaka mamoy angona amin'ny dingana isika, satria ny ampahany amin'ny rafitra fiasa dia mety ho simba, fa ity fizotrany ity koa mila fotoana lava kokoa vao hiasa indray ilay fitaovana.
rehefa voatery mamerina ny iPhone indray izahay, satria tsy mamaly ny asany izany, na amin'ilay mamela antsika hamono ny rafitra, dia tsy ho tratry ny fahaverezan'ny data na hanana fotoana mety simba ireo, satria mijanona tanteraka ilay rafitra ary tsy manao hetsika.
Fa maninona no mihantona ny iPhone-ko
Ny antony lehibe indrindra ahafahan'ny iPhone mampiseho ny olana amin'ny fikirakira azy, mahita azy io na amin'ny rafitra fiasa na amin'ny fampiharana manokana. Apple dia mamolavola kinova vaovao isaky ny iOS amin'ny fitaovana manokana, noho izany dia mifanaraka amin'ny tsirairay amin'izy ireo, ka ny fahombiazan'ny iPhone dia tokony ho ny tsara indrindra azo atao.
Isaky ny kinova vaovao an'ny iOS, tsy maintsy ataon'ny mpandrindra havaozy ny fampiharana anao mba hahatonga azy ireo 100% mifanaraka amin'ny kinova iOS vaovao. Soa ihany ho an'ireo mpampiasa, ny ankamaroan'ny mpamorona dia manavao haingana ny fampiharana azy ireo mba hifanaraka ary tsy manana olana amin'ny fampisehoana. Raha maharitra ela kokoa noho ny ilaina izy ireo, dia mifandray amin'izy ireo i Apple mba hanafainganana ny fizotrany fanavaozana raha tsy te hifankahita ivelan'ny App Store izy ireo.
Nanomboka ny taona 2017 dia nanolotra ny mpampiasa rehetra i Apple a programa beta ho an'ny daholobe iOS, ka izay mpampiasa te-hitsapa ny vaovao momba ny tsimbadika manaraka an'ny iOS dia afaka manao izany nefa tsy ho developer. Toy ny fitsipika ankapobeny, matetika i Apple dia mamoaka betas roa an'ny iOS manaraka ho an'ny mpamorona ihany aloha, alohan'ny hamoahana ny beta ampahibemaso.
Ny antony dia tsy iza fa fahamarinan-toerana rafitra. Ny fahamarinan-toerana dia faharoa ho an'ny mpamorona, satria ny tanjon'izy ireo dia ny hanombohany manavao ny rindran'izy ireo amin'ny kinova iOS vaovao ary mampiditra mifanentana amin'ireo asa vaovao nampiharin'i Apple.
Ny fahamarinan-toeran'ny fitaovan'ny iOS beta tsy dia ampy indrindra raha mampiasa ny iPhone isan'andro isika amin'ny maha fitaovana lehibe azy, satria azo averina tsindraindray izy io ary tsy misy antony mazava, azo akatohana na tsy hisokatra amin'ny fotoana inona ny fangatahana ankoatry ny faharetan'ny fotoana hisokafana ... beta io ary toy ny rehetra beta amin'ny rafitra fiasa, eo an-dalam-pandrosoana izy mandra-pivoakan'ny kinova farany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » Fampianarana sy torolàlana » Ahoana ny famerenana na famerenana ny iPhone X vaovao amin'ny dingana telo mora
Namana fandraisana anjara tena tsara namonjy ahy tamin'ny a
David Leonardo Gómez Pulido dia hoy izy:
Amin'ity toe-javatra COVID19 ity, araho am-pitandremana hosasana amin'ny rano (aza asitrika na apetraka ao ambanin'ny paompy), apetaho tsara fotsiny amin'ny felatanana ny rano misy savony. Mihodina ny telefaona finday (ampifanaraho amin'ny farihy paoma, ary rehefa afaka 10-15 segondra, dia manjelatra ny efijery ary maty, mipoitra indray ny farihy paoma ary mitohy ny tsingerina. Apetraho eo anoloan'ny heater kely, miandry ny rano mety hisy niditra tao izy mba etona, ary manantena aho fa afaka mamerina ny iPhone.
Famaranana, ny iPhone X dia fitaovana faran'izay marefo amin'ny rano, tsy marina fa tsy tantera-drano ny iPhone X.
Valiny tamin'i David Leonardo Gómez Pulido